Dhalinyaro qorshaynaysa kacdoono ka dhan ah DKMG iyo Shabaab | raascasayrmedia.com
← War Deg Deg ah:Xusni Mubarak Oo Is Casilay
Colaadu waa inay dhamaad yeelataa (Suldaan Idiris Suldaan Axmed ) →
February 12, 2011 · 11:06 pm
Dhalinyaro qorshaynaysa kacdoono ka dhan ah DKMG iyo Shabaab
Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool gobolka Banaadir ayaa soo dhaweeyay kacdoonkii ka dhacay wadamada Tuniisiya iyo Masar, iyagoo dhinaca kale sheegay inay qorshaynayaan dibad baxyo ay ka dhan ah dowladda KMG Soomaaliya iyo Xarakada Al Shabaab.
Dhalinyaradaani maanta kulanka isugu yimid ayaa waxaa ay sheegeen inay aad u taagayrsanyihiin kacdoonadii ka dhacay dalalka Tuniisiya iyo Masar kaasi oo sababay in ay xilka isaga dagaan Madaxweynayaasha wadamadaasi.
Jaamac Saciid Qorsheel oo kulankaasi ugu waramay warbaahinta ayaa sheegay in dhalinyarada gobolka Banaadir looga baahanyahay kacdoono ay kaga hortagayaan dowladda KMG Soomaaliy iyo Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab.
Jaamac ayaa waxaa uu intaasi ku daray in dhalinyarada gobolka Banaadir ay qorshaynayaan kacdoono ay ku cabirayaan dareenkooda ku aadan inay u ololeeyaan nabadda maadama uu dalka faraha kasoo baxayo.
Kacdoonadaan ay qorshaynayaan dhalintaan Muqdisho inay dhigaan maalinto birito ah ayaa waxaa uu kusoo adayaan xili guud ahaan magaalada Muqdisho ay u kala xirantahay dowladda KMG Soomaaliya iyo Xarakada Al Shabaab